ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားနဲ့ ဒုဝန်ကြီးအငြိမ်းစား စီးလားတဲ့ကားကို ချလန်ဖြတ်လိုက်မိတဲ့ ရဲတစ်ယာက် - TAWTHU
ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားနဲ့ ဒုဝန်ကြီးအငြိမ်းစား စီးလားတဲ့ကားကို ချလန်ဖြတ်လိုက်မိတဲ့ ရဲတစ်ယာက်
ငါ ! ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားကွ ။နောက်ခန်းထဲမှာ ဒုဝန်ကြီးအငြိမ်းစားပါတယ် ။စသည့်ဝိတ်သုံးပြီးစကားဆိုခဲ့သူကိုဥပဒေဘောင်တွင်းကပြန်လှန်နှိမ်ကွပ်ခဲ့သော ရဲတယောက် ။ ။
“ဟေ့ကောင် ငါ ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားနော်” တဲ့
ကြည့် ဘာမှတောင်မပြောရသေးဘူးကားလေးတားမိတာနဲ့တန်းပြောတာ ငါဗိုလ်မှူးအငြိ်မ်းစားနော်တဲ့ ဝိတ်သုံးတဲ့သဘောလား ခြောက်လှန့်လိုက်တဲ့သဘောလားတော့မသိ
x”ဟုတ်ကဲ့ ဗိုလ်မှူးခင်ဗျာ လိုင်စင်နဲ့ဝှီးတတ်လေး ပြပေးပါဗျ”
ထိုလူကအမောင်းလိုင်စင်ထုတ်ပြတယ် ဝှီးတတ်ကတော့မပါဘူးတဲ့ဝှီးတက်ပါမလာဘူးဆိုတော့ ထုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ ယာဉ်တစ်စီးမှာပါလာရမဲ့ လိုင်စင်ဝှီးတတ်တို့အကြောင်းရှင်းပြမိတယ် xမပါလာခဲ့ပြန်ရင်လဲ ချလန်လေးတွေဖြတ်ကြရပီး သက်ဆိုင်ရာရုံးမှာပြန်လည်ရွေးယူရမဲ့အကြောင်းရောပေါ့
x”မင်းဖြတ်စရာမလိုဘူး ငါ ဖုန်းဆက်မယ်”
x” မင်းတို့ကိုဝှီးတတ်မပါရင်ချလန်ဖြတ်ဖို့ ဘယ်သူကခိုင်းတာလဲ” တဲ့
ဒါတော့နည်းနည်းများသွားပီ ကျွန်တော်ကိုတင်မဟုတ် လည်ပတ်နေတဲ့စည်းကမ်းစနစ်ကိုပါအပြစ်ပြောချင်တဲ့သဘောဆက်ပြောနေရင်လဲဆန့်ကျင်ဘက်တွေချည်ပဲ ဖြစ်လာမှာမို့လို့ကျွန်တော်မြိုသိပ်နေလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချလန်လေးတော့ရေးလိုက်ပါပီထိုလူကဆက်ပြောတယ်
x”နောက်မှာ ဒုဝန်ကြီးအငြိမ်းစားကွ မင်းချလန်ဖြတ်ချင်ရင် ဒုဝန်ကြီးနာမည်နဲ့ဖြတ်”
x” ဗိုလ်မှူးကလက်ရှိယာဉ်မောင်းသူပါခင်ဗျ ယာဉ်မောင်းသူမှာ တာဝန်ရှိတာပါဗျ”
x” မင်းဖြတ်ချင်ရင် ဒုဝန်ကြီးနာမည်နဲ့ဖြတ်” တဲ့
ကျွန်တော်ရေးပီးသားချလန်လေးကို ကားထဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ် တော်ပီလေပေါ့ ရှင်းလေရှုပ်လေလုပ်နေသူမို့ ဆက်မပြောချင်တော့ပါဘူး အခြားကားတွေဘက်စစ်ဖို့ထွက်ခဲ့လိုက်တယ်မကြားပါဘူ ထိုလူလိုက်လာတယ်
ု” ဟုတ်ကဲ့ ရုံးမှာစောစောကချလန်နဲ့ ပြန်ရွေူးရမှာပါဗျ”
x”ငါကရန်ကုန်ကကွနောက်တစ်ခေါက်မလာနိုင်ဘူး မင်းမှာအဲ့လိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလားကွ” တဲ့
ဲကဲ နည်းနည်းမဟုတ်တော့ဘူး များသွားပီဗျာသီးခံနှိမ့်ချလို့ ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာ ဘောင်ကျော်သွားပါပီ
x”ဒါကခင်ဗျားအပြောလေ ထားပါဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါလျှက်နဲ့ ဒီလောက်လေးတောင် လေ့လာမှု အသိပညာနည်းလှချည်လား လက်ရှိနိုင်ငံတော်မှာ ဘယ်လိုစည်းကမ်း ဘယ်လိုဥပဒေတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုတာလောက်က်ိုမှ ခင်ဗျားလေ့လာမထားဘူးလားပြောတော့ဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစား ကားလေးမောင်းတာလောက်တောင် စည်းမရှိ ကမ်းမရှိ ဟိုရာထူးနဲ့ခြောက် ဒီရာထူးနဲ့ခြောက် စည်းကမ်းမဲ့သူခြောက်တဲ့စကား ဘယ်သူမှ အကြောက်တရားမရှိတော့ဘူးဆိုတာခင်ဗျားမှတ်ထား”
ကျွန်တော်အသံလေးနည်းနည်းကျယ်လာတော့ ကားပေါ်ကအခြားသူတွေပါဆင်းလာကြတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာထားတွေကတော့ ဒီလူနဲ့တခြားစီပြောမှတော့မထူးဘူးဆိုပီး အရင်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပါတစ်ခုချင်းပြန်ဖြေပြောပစ်လိုက်တယ် ဗိုလ်မှူးဆိုပီးမထမဝိတ်သုံး ဒုဝန်ကြီးအငြိမ်းစားဆိုပီးဒုတိယခြိမ်းခြောက်ကျွန်တော်ကမကြောက်တတ်တဲ့အပြင် ကိုနားလည်တဲ့ဘာသာရပ်မို့ ကလောင်သွားထက်ထက်တွေနဲ့ ပြန်ထိုးနပ်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းတွေဒီစာလေးဖတ်ပီးစကားအပြောအဆိုအတွက် ရွေးချယ်တတ်စေချင်ပါတယ် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောလဲဒီပါးစပ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောလဲဒီပါးစပ်
ချိုချိုလေးစပြောလဲဒီပါးစပ် မာထန်ထန်စပြောလဲဒီပါးစပ်ပဲလေလူဆိုတာ သူသူကိုကို ချိုချိုလေးပြောတာကြိုက်ကြတာမို့ ဘယ်လိုအနေအထားပဲဖြစ်ဖြစ် ချိုချိုသာသာပြောဆိုဖြေရှင်းကြရမယ်လေ
နောက်တစ်ခုကရာထူးနိမ့်တဲ့အောက်ခြေဝန်ထမ်းဆိုတာ အထက်လူကြီးတွေရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကို သိပ်မျှော်လင့်တာအေးမြတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းပြောထားခဲ့ရင် ကြည်နူးပီတိဖြစ်လို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့် ဒီ post ရဲ့သာဓကလေးကိုယူပီးမှာယွင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်း မှားယွင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကို ရှောင်လွှဲနိုင်ပါစေအမှားသရုပ်ပြဆက်ဆံဖြေရှင်းသွားတဲ့ ဗိုလ်မှူး(အငြိမ်းစား)ကို ကျေးဇူးတင်ရင်း အဆိုး အကောင်း ခွဲခြားမှတ်ယူနိုင်ပါစေ
ယခုလောက်ဆိုလျှင်အဆိုပါဗိုလ်မှူးအငြိမ်းစားသည် ကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်သည့်ချလန်အား ကြည့်ရှုကာ ဒေါသထွက်နေမည်လား အမှန်မြင်နိုင်မည်လား ကျွန်တော်မသိ ကျွန်တော်ကတော့ ထိုအဖြစ်အပျက်အား မှတ်တမ်းတင်ဖမ်းယူထားသည့် ကားအတွင်းမှ cctv မှတ်တမ်းလေးအားပြန်လည်ကြည့်ရှုလျှက်
ဝဋ်​​ကြွေးပါလာပြီဆိုလျှင်​ ! (ကိုယ်ကောင်းပေမယ့်သူမကောင်းတာ”ဝဋ်”ကြောင့်ပါ)
လူတွေ ပြောပြောနေကြတဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ်းဆိုသည်မှာ
မြန်မာမှာဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင် ဆန်းဆန်းပြားပြားနဲ့ မင်္ဂဆောင်သွားတဲ့စုံတွဲလေး သိပြီးပြီလား
အိပ်ရာ စောစောထ မလား? အိပ်ရာ နောက်ကျမှ ထမလား? လေ့လာ သင်ယူမလား? ရေလိုက် ငါးလိုက် နေမလား? …..